Bentley Map Waxay noqon kartaa mid aad u adag? - Gofumed
Bentley Map Waxay noqon kartaa mid aad u adag?
Maarso, 2010 Geospatial - GIS, Microstation-Bentley
Cutubka ka mid ah Microstation Geographics in Bentley Map waa horumar ah ka shaqeynayaan in qalab this sameeyey, iyo dabcan, isku day in aad ku qasabto inay ku guuleysato users of xal kale sida MapInfo, ArcView, oo hadda liiska oo dhan barnaamijyada qiimaha hooseeyo iyo il furan .
Hadda oo kaliya waxaan la shaqeynayaa degmo rasmi ah oo doonaya in ay hirgeliso xalka GIS, waxay i waydiisteen inaan soo bandhigo astaanta. Waxaan sharraxay in this ma si fiican u shaqeeyaan, ay yihiin kuwa go'aamin waa, sidaas darteed waxaan u fadhiisteen inay wax size filayo inta u dhaxaysa waxa ay doonayaan inay sameeyaan, lacagta ay leeyihiin iyo doorashooyinka ee jiritaanka la heli karo si ay caadi ah lama huraan ah la beddelo dadka afar kasta sano ee arrimaha siyaasadda.
Ka dib markuu arkay xal oo kala duwan, waxaannu ku tirinnaa in aysan rabin software il furan ama wax yar loo yaqaan. In dadka isticmaala ka imaanaya ArcView 3x iyo Microstation J, ay aad u xiiseeneyso garanaya sida ay u fududahay waa in ay hirgeliyaan database a da'ayeen, iyagii tusay sida ay u shaqeeyaan ESRI ArcCatalog ah, ka dhigay su'aalaha aasaasiga ah ee sababta ay ahayd ArcSDE loo baahan yahay iyo in uu ahaa farqiga u dhexeeya ArcIMS iyo GIS Server. Marka aan bilaabay sharxaya Bentley Geospatial Maamulaha Map aan dhegaysan ka mid ah ixtiraamka, laakiin ugu dambaysta, Traroscaron indhaha nus ah sida Garfalka oo ay iiga sheegi jireen qalbiyadooda waxa dadka kale iiga hore u sheegay:
Ma noqon karto mid aad u adag?
Ilaa hadda, dadka isticmaala juquraafiyadu waxay leeyihiin dhibaatooyin u haajiraan ilaa Bentley Map, ma aha oo kaliya sababtoo ah waxa ay la micno tahay isbedelka xogta ama dib-u-dhiska qalabka caadooyinka, laakiin sidoo kale sababta oo ah Readme Ma ahan wax ku filan waxna maahan wax macallimiin ah oo hagaya oo sharxaya amarka la raacayo. Tusaale ahaan:
Fahmida waxa loo baahan yahay in la sameeyo Maamulaha Geospatial, kaas oo user, sida loo abuuro domains, sida loo abuuro foomamka si ay u quudiyaan dgn xml, ma aha sidaas u dareemo. Keliya fahamka xidhiidhka shuruudaha-Hawl-Hawleedka-UI waa dhexdhexaad u dhexeeya 3 ee waaberiga.
Ma aha in la sheego dilka ka yimid Map Map, oo leh Maamulaha Amarka iyo Maareynta Maabka.
Maxaa dhacaya waa in isticmaalaha Geographics ay filayaan in ay u arkaan badhamada sidii hore ahayd -inaanay jidka weyn ku socoteen-.
Maamulaha Mashruuca waxa uu qaatay waxa uu ahaa Maamulaha Muuqaalka, falanqaynta faylaha waxaa hadda loo yaqaan 'Overlay,' isla meeshaasna waxay ahayd khariidad iyo mabaadi'da mawduucyada. Haddii taasi aan la raadin dhalada weyn, qofku wuxuu u maleyn karaa in Bentley Map aysan laheyn shaqadan.
Ka dibna Maamulaha Meelka wuxuu ku jiray guddiga dhinaca midig ee loo yaqaano Maamulaha Amarka, laga bilaabo halka aanad iska furi karin ama u jeedin lahaa muuqaalada, laakiin kaliya abuur. Ma jirto siyaabaha loo dalbado ama looga saaro sifooyinka sida tan, wax kale oo badan ... marka la soo gabagabeeyo, way adag tahay dadka ugu khibrad badan.
Waa in aan qirto, in dareenkan aan wax isbeddel ahi isbeddelayn dhowr sanadood, markii ay i tusiyeen markii ugu horeysay ee la igu magacaabo.
Waxay ahayd shirkii 2004 ee isticmaalaha, marka ay suurtagal tahay Xml Foature Markup (XFM), oo horay u socotay on Geographics 8.5. Later waxaa loo yeeray Bentley Map, laga bilaabo XM 8.9, waxayna u yeeraan inay dhaxal u yeeshaan dhammaan kor ku xusan. Waqtigan xaadirka ah, waxaan xiiseyneynay suurtagalnimadeeda, laakiin aragtida ah inay weli ahayd qalab weyn, waxaan go'aansannay inaan dib u dhigno jadwalka lagu sameeyay joqraafiyada.
Fiidiyowyada hoos lagu soo bandhigay waxaa lagu sameeyay 2005, laga bilaabo horumarinta .net Visual Basic oo ka timid Microstation in wiil yar oo rabitaan badan sameeyay, waayo Bentley waxay isku xirtay shaqooyinka XM, kuwaas oo Waan idinla hadlay maalmo yar
Laga soo bilaabo Geographics ilaa xfm. Markuu schema a abuuray, ayaa loo qorsheeyay uu si aad u lakabka kala iibsiga ka mashruuca Geographics ku dhajinta on Oracle, qeexay sifooyinka in la raadinayo oo la dhisay qaadashada xogta ee XML on DGN isku. Ujeedadu waxay ahayd in degmada ay hayso xogta DNG, iyada oo aaney noloshooda ku adkeynin xogta macluumaadka halkaasoo aysan jirin wax xidhiidh ah.
Soo saar daaha cadastu. Sida kiiska hore, aad dhoofin yaabaa maps degmo, xogta aasaasiga ah ee xfm u xiiso ahaayeen sida lakabka XML in DGN, oo ay ku jiraan muhiim ah oo ku salaysan xuduuddadhulka ku cadastral. Tani, waxaa la filayay in ay kari karaan dayactir, kadibna waxay dejinayaan dib-u-heshiin xog ah oo kala duwan oo ay noqdeen macaamil dhaqaale.
Ku dar khariidadaha degmada. Qalabkani wuxuu ahaa in uu ka soo kiciyo xayndaab, khariidadaha oo ku jajabiyey joqraafi ahaan joomatari ahaan, dhammaantood labada lakab ee la sameeyay tallaabada hore. Si la mid ah waxa Mashruuca Joogtada ah ee loo isticmaalo waxa ka diiwaangashan Degaanka.
Jooji oo leexo lakabyada. Maareeyaha Mashruucani wuxuu soo saaraa shaqadan, laakiin markaa kadib ma aanan haysan wax kale oo aan ahayn Geographics oo leh Maamulaha Muuqaalka, laakiin kiiskan leh lakabyo XFM.
Falanqaynta falanqaynta Tani, waxa la sameeyey waxa ay ahayd in dib loo dhiso farsamooyinka abuurista topolojiyada iyo falanqaynta oo leh Juquraafi. Waxaan abuuri karaa lakabyo dhibco ah, xariiqyo, garaanyo, ka dibna ka sameeyaan iskutallaab
Waxaan ku jiraa warbixinta HTML. Later waxaa la dhexgeliyey Maareeyaha Mashruuca, laakiin waxaan u maleynayaa inaan waligeed la lahayn xaruntaas.
Thematic. Tani waxay hadda ku timid Maareeyaha Mashruuca, haddii fasallada muuqaalka la abuuray, laakiin ka hor intaan Geographics keenin dabacsan iyo sida sida loo horumariyo.
Mabaadi'da shakhsiga ah. Tani waxay ka timid sifooyinka diiwaanka Oracle, inkastoo aysan ku jirin xogta XFM. Sida joqraafiyada, waxaa loo oggolaaday inuu abuuro sida DNG.
Raadi sifooyin. Iyada oo tani ay tahay baaritaan ayaa laga sameeyey qaar ka mid ah shuruudaha, iyo midabada marka la doorto. Waxa kale oo loo ogolyahay in loo diro warbixinta html.
Daraasada dhaqaalaha bulshada. Waxay dhacdaa in degmooyin badani ay leeyihiin sahan bulsho-dhaqaale oo ay la socdaan rikoorka cadawga, waxa aan sameynay taas oo ka timid diiwaanka Oracle, badhanka ayaa loo sameeyay wareejinta xogta xfm. Iyadoo lagu saleynayo shuruudda mawduucyada waxay noqon kartaa unug kale oo ka faa'iideysan kara waxa loo yaqaan mashruuca "shuruudaha".
Ku wareeji bartamaha. Sidoo kale, maadaama degmada ay ku salaysan tahay shuruudo gaar ah, waxay calaamad ka dhigtay mid ka duwan qaybta hoose, waxaa la qorsheeyay in xogta sahanka dhaqaalaha ee loo gudbin karo xaruntan. Dabcan, sida xaashida ka muuqata sahanku waa mid aad u weyn, wada-hadalku waa in laga tago labada dhinacba, si ay u sameeyaan fiidiyooga maskaxdiisu tahay cabbirka.
Ka fogow Maamulaha Geospatial. Fahmaan hawlgalka waa mid aad u adag, waxaan u sheegay sameeysa in qaadan doonaa si xun, sidaa darteed ka dhanka ah ee qariirada suurto gal ahayd in la abuuro sifo cusub, u yeelaan nooca, calaamadaha iyo xitaa guryaha Dialog sanduuqa. Waxaan sidoo kale ku siinnay ikhtiyaarkaaga si aad u xaddidid muuqaal hore loo abuuray xitaa xitaa ku dabaqdo shuruudaha hore ee la abuuray
Cunto badan oo sigaar ah, Bentley waa in ay hirgelisaa waa macno ahaan a ilkaha ka sameeyaan.
Ku dhaji xogta Fox Sawir. Waxaa jiray nidaam degmo oo la yiraahdo SIIM, kaas oo xogta cadawga ku jiray iyada oo la adeegsanayo habka qiimeynta weyn iyo hoosta shaxaadka muhiimka ah oo ku saleysan miisaaniyadaha. Waa hagaag, waxa aan sameynay ayaa abuuray foom akhriya dbf xogta, laakiin laga soo qaaday khariidadda xfm ee Microstation.
Daabacaadda shabakadda. Tilmaamo daabacan ayaa lagu daray isticmaalka Publisher Geoweb, oo kor u qaadaya xogta dusha ka soo rogtay lakabyada xfm.
Dhammaan waxa kor ku xusan waxaa lagu sameeyey Microstation VBA oo leh rakibeyaal ka tagay wax walba, mashruuca XFM iyo xitaa Geo Web Publisher.
Maadaama aanan ku faraxsanayn waxan oo dhan:
Ugu horreyn, maxaa yeelay ma jirin fursad ay nidaaminta nidaamka, kaliya sameeyaan fiidiyowyada. Waxaan ku farxi lahaa inaan u qaadno 2007 BE Awards, waxaan hubnaa inaan helnay magacaabid maaddaama ay ahayd horumarinta koowaad ee XFM.
Markaas, waxaan ogahay kaliya dhowr degmo ayaa u yimid inay hirgeliyaan, sababtoo ah mashaariicda dawladdu way murugoonayaan sannad kasta 4.
Ugu dambeyn, sababtoo ah Bentley waxay u baahan tahay -ee noocyada 2008- Hagaajinta fududeynta hawlgalka Bentley Map, oo ah qalab GIS ah -Fikradayda-, diyaar uma aha qof inuu iibsado xirmada, qaado buugga, caawimaad ka raadso golaha iyo hirgelinta nidaam.
Gebogebadii, saaxiibadii waxay u baxeen xalka kale, inkastoo ay qarashkeeda ku baxday.
Post Previous«Previous Casinos khadka ugu wanaagsan
Post Next Bentley Map, waxaan rajeynayaa inaan wada jirnoNext »
2 Jawaab "Bentley Map Waxay noqon kartaa mid aad u adag?"
Horumarka waxaa lagu sameeyey mawduuca Muuqaalka Visual Basic ee keenay Microstation, oo leh 8.5 version, waxaana uu ku orday Geographics 8.5 iyo XFM kuwaas oo horay u keenay version-ka.
Diiwaanka wuxuu ahaa Oracle, Bentley Project Wise map map iyo daabacaadda Bentley Geoweb Publisher.
Ma ogi haddii uu jiro tixraac ku saabsan webka oo aad ka heli karto wax ku saabsan horumarkaas, laakiin waxa aan awoodi karo in aad iskaashi ka sameysid.
tifaftiraha (at) geofumadas.com
Dhibaatooyinka burburin isagu wuxuu leeyahay:
Waxaan jeclaan lahaa in la ogaado sida aan u sameeyey modules iyo qu oo dhan barnaamijkii iyo haddii aan sheegi karin halka aan awoodo in guide contrar ah waxa aad did'm in la mid ah kuwaaga si laakiin geographics mashruuca MicroStation v8 oo u baahan wax ka har sida in mahad aad taageero